Cofa iplagi yeWordPress ene-Admin ekhutshwe | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 14, 2007 NgoLwesithathu, Julayi 4, 2007 Douglas Karr
Cofa iswiti entle kubahlalutyi isicelo esenza ingqiqo epheleleyo kumsebenzisi osisiseko kunawo nawaphi na amakhwenkwe amakhulu phaya. Ndicinga ukuba imakethi encinci yindawo enkulu kwaye uClicky kufuneka abe ngumniniyo kungekudala - inenqaku ujongano olugudileyo, imizobo emikhulu, kunye nolwazi olubonisayo lufanelekile kwiblogger ephakathi.
Umzuzwana ubuyile, u-Clicky wakhupha iplagi yeWordPress ukuze ayongena kwi-WordPress. USean wenze inqaku kwiphepha lakhe leGoodie ukuba ebengazi kakhulu ngeWordPress kwaye ebengathanda ukuba akhe iphepha lokulawula usetyenziso ngaphakathi konxibelelwano lweWordPress, kodwa wayengazi ukuba njani ngelo xesha. Ndichukunyiswe nyhani ngumsebenzi osele wenziwe kuClicky ndiye ndawayeka umgca ukuze ndibone ukuba ndingancedisa na. Impendulo 'yayiqinisekile'!
Kwisithuba seeyure ezimbalwa kule mpelaveki, ndakhe iphepha elimnandi lolawulo elalinazo zonke izinto ezifunekayo. USean wayinxibisa kwaye wayifaka isitayile (kakuhle) ngakumbi ku-Clicky kwaye unayo ndiyikhuphe namhlanje! Amaxesha amaninzi awufumani thuba lokunceda ngolu hlobo- kodwa ndingathanda ukubona isicelo esifana neClicky samkelwa esiqhelekileyo. Yiloo nto imithombo yokusebenzisana evulekileyo emalunga nayo, akunjalo?!
Fumana i Cofa uhlalutyo lwewebhu akhawunti kwaye ukhuphele Cofa iplagi yeWordPress.
Izinwele kunye nobumfihlo, ukungenelela okanye amava omsebenzisi?
Juni 14, 2007 ngo-5: 02 PM
Ndibe neengxaki ezimbalwa zokuthembeka nge-getclicky kwiinyanga ezimbalwa emva kodwa babonakala beyilungisile yonke le nto kwaye ngoku bayayisebenzisa. Enyanisweni ndibhalisele iphakheji yabo 'yeblogi' yokuba i-$ 19 ngonyaka ikunika izibalo ezigcweleyo zeeblogi ezi-3 endicinga ukuba yintengiso.
Ngokuqinisekileyo ndiya kuzama i-plugin.
Jun 15, 2007 ngo-1:56 AM
Omnye umsebenzi omkhulu Doug. Usiba yincutshe ngoku kunye neeplagi zeWordPress 🙂